कोरोना बढेपछि फेरि ४५ दिन सम्म लकडाउन थपियो !! पुरा पढ्नुहोला – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/कोरोना बढेपछि फेरि ४५ दिन सम्म लकडाउन थपियो !! पुरा पढ्नुहोला
International NewsLockdown News
काठमाडौं । बिश्वभर कोरोना महामा`रीको संक्र`मण तिव्र रुपमा फैलिए संगै केही दिन खुकुलो भएको अष्ट्रे`लियाको मेल`बर्न र भिक्टोरिया राज्यमा कोरोना भाइरस संक्र`मितहरु धमाधम थपिन थाले पछि मेलबर्नमा आजै देखि लागू हुनेगरी आ`गामी ४५ दिनका लागि लकडा`उनको घोषणा गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा घोषणा गरिएको यो तेस्रो चरणको लकडा`उन हो । मेलबर्नमा विगत तीन सातादेखि कोरोना संक्र`मितको संख्या लगातार बढ््रदै गएपछि त्यहाँ लकडाउनको घोषणा गरिको हो । मेलबर्नमा कोरोना संक्रमित वढ्रदै गएपछि साब`धानी अपनाउन मेलबर्नका रेष्टुराँ, बजार, होटल ब्यबसाय पुन बन्द गरिएको हो ।
यसअघि कोरोना संक्रमणमा केही हदसम्म कमी आएपछि ल`कडाउन फुकुवा गरिएको थियो । यद्दपी सामा`जिक दुरी कायम नगरी बजार क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल वढेपछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो । यो लकडाउन घोषणासँगै भिक्टोरिया राज्यमा ब`स्ने करिब ५० लाख मानिस पुनः लकडाउन पालना गर्न बाध्य भएका छन् ।
लकडाउन अवधिभर तोकिएको समयमा मात्रै खा`द्यान्न र अत्याव`श्यक सामान किन्न पाउने नियम लागू गरिएको छ । त्यसैगरी रेस्टुराँ र क्याफेहरूले खानेकुराहरुको प्याकिङ सिस्टम लागू गर्नुपर्नेछ ।
अत्याबशिकिय सवारीसाधनको हकमा भने अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।अनुमति–पत्रका लागि आवेदन दिँदा झुठो विवरण पेश गरिएको खण्डमा चार हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएको छ ।अस्ट्रेलियामा हालसम्म ८ हजार ८ सय बढी संक्रमित छन् भने मृतकको संख्या १ सय ६ पुगेको छ ।(एजेन्सी)